China Abenzi beengcambu zeBupleurum kunye nabathengisi | HEX
Ingqele kunye nomkhuhlane, ukubanda kunye nokutshisa ngobushushu, isifo seengcongconi, ukuma kwesibindi, iintlungu zesifuba kunye neembambo, ukuphuma kwempundu, ukuphuma kwesibeleko, ukuya exesheni ngokungaqhelekanga
IBupleurum, igama lamayeza amaTshayina. Iyeza lamayeza esintu afakwe kwi "Chinese Pharmacopoeia". Icandelo lezonyango yingcambu eyomileyo yeBupleurum okanye iBupleurum angustifolia. Gubha entwasahlobo nasekwindla, susa iziqu, amagqabi kunye nentlenga, kwaye wome. IBupleurum sisiyobisi esisetyenziswa rhoqo. Ikwabizwa ngokuba ngumsi womhlaba, imifuno yasezintabeni, ingca yamakhowa, iinkuni, iyakrakra kwindalo kunye nokungcamla, ukubanda kancinci, kwaye yeyesibindi kunye nenyongo. Inefuthe lokudibanisa ngaphandle nangaphakathi, kuthoba isibindi kunye nokuphakamisa i-yang. Isetyenziselwa ukubanda kunye nomkhuhlane, ukubanda kunye nobushushu, isifo seengcongconi, ukuma kwesibindi kunye ne-qi, iintlungu zangasemva, ukuqaqamba, ukuhla kwesibeleko, ukuya exesheni ngokungaqhelekanga.
Egqithileyo Ukukhula kweTangerine Peel
Ukukhula kweTangerine Peel
Igqabi eliqhelekileyo le-perilla